MV tshintsha abavelisi kunye nababoneleli - China MV Shintsha ifektri
I-GW-12 yangaphandle AC HV Cima iTshintsho
I-GW □ -12 yangaphandle ye-AC HV yokuqhawula iswitshi (unqamle iswitshi esifutshane apha ngezantsi) isetyenziswa kwinkqubo yamandla ombane ngobuninzi obulinganisiweyo be-50Hz, i-voltage ye-12kV ebekiweyo, ikakhulu yokwenza okanye ukwaphula isekethe phantsi komgca obonelela ngombane kwizixhobo zenkqubo yokuhambisa umbane ophezulu. Ngenxa yoko uhlobo anti-ungcoliseko unqamle iswitshi ngempumelelo ukusombulula ubumdaka flash ngexesha lokusebenza ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabasebenzisi kwindawo ungcoliseko kakhulu.
I-GW9-24 yangaphandle AC HV Cima iTshintsho
I-GW9-24 (W) uthotho lwangaphandle lwe-HV lokuqhawula iswitshi sisakhiwo esinye sepali, esisetyenziselwa ukuvula okanye ukuvala imijikelezo ephantsi kwevolthi kodwa imeko engenamthwalo kwinkqubo yombane yangaphandle ye-24kV. Isisigxina isikhombi sokutsala kunye nesixhobo sokuzivalela, kunye nokusebenza kwesiphumo ngokufaka i-hook-stick. Ukuqhubeka ngakumbi, uhlobo oluchasene nongcoliseko lomoya lunokusombulula ngokufanelekileyo ukukhanya ngenxa yongcoliseko ngexesha lokusebenza kokucinywa konxibelelwano ukuze wanelise iimfuno zabasebenzisi kwindawo engcoliswe kakubi.
GW5-40.5 SHINTSHA UKUQHUBA
Isicima sokucima umbane esisebenza ngaphandle se-GW5-40.5 sisetyenziselwa ukwenza okanye ukwaphula isekethe yombane ophezulu kumgangatho we-40.5kV, inkqubo ye-AC 50 / 60Hz. Iyakwazi ukuvula kunye nokuvala amandla amancinci amancinci kunye ne-inductive yangoku.
GW4-40.5 SHINTSHA UKUQHUBA
Uhlobo lwe-GW4 lokucima ukhuphelo lombane oluphezulu luhambelana neemfuno kwi-GB1985-2004 High-voltage AC Ukucima iiSwitshi kunye ne-Earthing Switches, IEC62271-102: 2002AC Ukucima iiSwitshi kunye neeNdlebe zeNdlebe, kunye ne-IEC60694: 1996 Igatya eliQhelekileyo leVolge ephezulu yokuTshintsha kunye nezixhobo zoLawulo.
I-GN30-12 (D) yeeNdawo eziHamba ngeVolthi ePhakamileyo yokuTshintsha umbane
Isinxibelelanisi sokucinywa kwe-GN30-12 (D) sisixhobo sombane esingaphakathi sombane we-12kV, isigaba se-AC50 / 60Hz. Isetyenziselwa ukwenza ikhefu kunye nokudlulisa okwangoku kwezixhobo zombane ze-HV phantsi kweemeko zombane kwaye akukho umthwalo. It
isebenzisa udonga ngofakelo ngokunjalo
I-GN19-12 (C) yoDweliso lwangaphakathi oluVulekileyo lweVoltage yokuTshintsha
I-GN19-12 (C) iswitshi yokuqhawula uqhagamshelo esendlwini isebenza kwinkqubo yamandla ombane olinganisiweyo we-12kV, AC 50 / 60Hz. Ixhotyiswe nge-CS6-1 indlela yokusebenza yesandla kwaye isetyenziselwa ukwaphula nokwenza isekethe phantsi komthwalo. Kukho uhlobo olongezelelekileyo longcoliseko, uhlobo oluphakamileyo kunye namandla abonisa uhlobo.